အလုပ်တွေကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေတဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ စည်ဖြိုး ကိုကြည့်ကာ ချစ်မ၀ဖြစ်နေတဲ့ ခင်လွှမ်း – Shwewiki.com
ပရိသတ်ကြီးရေ စည်ဖြိုး ကတော့ ထူးခြားတဲ့နာမည်လေးနဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေရိုက်ကူးရင်း ပရိသတ်အားပေးမှုရရှိလာတဲ့မင်းသားတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေ လည်းများစွာရိုက်ကူးခဲ့ပြီး MRTV4 မှာပြသခဲ့တဲ့” အလင်းထဲကလူ ”ဇာတ်လမ်းတွဲဟာဆိုရင်လည်း ပရိသတ်တွေ အားပေးဝန်းရံခဲ့ရတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။
မိခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူ အလှူအတန်းတွေပြုလုပ်တတ်တဲ့ သဒ္ဒါတရားထက်သန်လွန်းတဲ့မင်းသားတစ်ယောက်လို့ပြောရင်လည်း မှားမယ်မထင်ပါဘူးနော် ။ လက်ရှိမှာလည်း သူ့ရဲ့ဇနီးခင်လွှမ်းအနေနဲ့ သူ့ရဲ့ကိုယ်ဝန်ကိုလွယ်ထားရကြောင်း ပရိသတ်တွေကို တရားဝင်အသိပေးခဲ့ပြီး လက်မှတ်ရေးထိုးကာ ဇနီးသည် ကိုလိုလေေ သးမရှိဂရုစိုက်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါ တယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ ဇနီးဖြစ်သူခင်လွှမ်းက ” မိဘတွေအတွက် မိသားစု အတွက် ငါ့ယောက်ျားလေး နေ့မအား ညမနား အလုပ်တွေ ကြိုးစားနေတာမြင်ရတာ သနားလည်းသနားတယ် . ကျေးဇူးလည်း အရမ်းတင်တယ် . အရမ်းချစ်တယ် ကို 🥰0*You are the best * 😘”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ စည်ဖြိုးကိူချစ်ပိုကာ ချစ်မဝဖြစ်နေတဲ့စာလေးကို တင်လာခဲ့တာပါ။ ဖေဖေဖြစ်တော့မယ့်စည်ဖြိုးကတော့ အလုပ်တွေကြိုးစားနေပြီတဲ့ ပရိသတ်ကြီးရေ ။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေး တစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြ ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါ တယ်နော်။
ပရိသတျကွီးရေ စညျဖွိုး ကတော့ ထူးခွားတဲ့နာမညျလေးနဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားတှရေိုကျကူးရငျး ပရိသတျအားပေးမှုရရှိလာတဲ့မငျးသားတဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ ။ ဗီဒီယိုဇာတျကားတှေ လညျးမြားစှာရိုကျကူးခဲ့ပွီး MRTV4 မှာပွသခဲ့တဲ့” အလငျးထဲကလူ ”ဇာတျလမျးတှဲဟာဆိုရငျလညျး ပရိသတျတှေ အားပေးဝနျးရံခဲ့ရတဲ့ ဇာတျလမျးတှဲပဲ ဖွဈပါ တယျ။
မိခငျဖွဈသူနဲ့အတူ အလှူအတနျးတှပွေုလုပျတတျတဲ့ သဒ်ဒါတရားထကျသနျလှနျးတဲ့မငျးသားတဈယောကျလို့ပွောရငျလညျး မှားမယျမထငျပါဘူးနျော ။ လကျရှိမှာလညျး သူ့ရဲ့ဇနီးခငျလှမျးအနနေဲ့ သူ့ရဲ့ကိုယျဝနျကိုလှယျထားရကွောငျး ပရိသတျတှကေို တရားဝငျအသိပေးခဲ့ပွီး လကျမှတျရေးထိုးကာ ဇနီးသညျ ကိုလိုလေေ သးမရှိဂရုစိုကျနတေဲ့ သူတဈယောကျလညျးဖွဈပါ တယျ။
ဒီနမှေ့ာတော့ ဇနီးဖွဈသူခငျလှမျးက ” မိဘတှအေတှကျ မိသားစု အတှကျ ငါ့ယောကျြားလေး နမေ့အား ညမနား အလုပျတှေ ကွိုးစားနတောမွငျရတာ သနားလညျးသနားတယျ . ကြေးဇူးလညျး အရမျးတငျတယျ . အရမျးခဈြတယျ ကို 🥰0*You are the best * 😘”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ စညျဖွိုးကိူခဈြပိုကာ ခဈြမဝဖွဈနတေဲ့စာလေးကို တငျလာခဲ့တာပါ။ ဖဖေဖွေဈတော့မယျ့စညျဖွိုးကတော့ အလုပျတှကွေိုးစားနပွေီတဲ့ ပရိသတျကွီးရေ ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေး တဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွ ပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါ တယျနျော။